Izay ahafahako mianatra tsara indrindra ry zalahy mahafantatra. (Tovovavy, Ny Namana, Ny Tovovavy An-Tsekoly)
Handeha aho mba rehetra-ny tovovavy an-tsekoly, tsara tarehy aho, saro-kenatra aho ary mbola tsy ampy taona ny Disco, sns. misy, angamba, satria ny toerana misy anao na inona na inona ny fivoriana dia manondro fa maro ny tanora hihaona izay mandrakizay. Raha Eny, avy eo nandeha tany amin’ny namana vitsivitsy. (: raha tsy izany dia tsy afaka miantso, ohatra, ao amin’ny ivelan’ny trano dobo na farihy angamba roa ry zalahy miaraka amin’ny namana. raha toa ka tsy ianao mahafantatra izay tokony holazaina, dia ny maka namana amin’ny izay dia tsy saro-kenatra noho izany dia afaka manampy anao nivoaka avy eo. (noho izany ny saro-kenatra, indrisy, tena ratsy. Manomboka miadana, tsiky amin’ny olon-kafa zaza eny an-dalambe. Avy eo dia mangataka amin’ny Fiara fitateram-bahoaka taorian’ny fotoana, sy ny sisa. Mahafinaritra fa ny atitany dia ny fanatanjahan-tena club na koa, ny zava-dehibe dia ny hoe tsy misy afa-tsy ny ankizivavy. Araka ny nolazaiko hoe ny fomba Fanao ny zavatra rehetra, ny farany dia mandeha mitokana, na raha toa ka tsy maintsy mandresy. Maditra sy misokatra dia ny antsasaky ny ady.) Mirary soa ho dobo filomanosana, ny fikambanana, ny fanatanjahan-tena, toe-javatra, clubs, trano Fisotroana, miaraka amin’ny Namana avy any aminà sekoly hafa ny zavatra tokony atao ary hoe mba hitondra namana lehilahy sy. Hey, izaho izao fanovana ny tovovavy ny sekoly. Ny Olana: te hanana namana na fotsiny buddy. Fa toy ny azoko an-tsaina dia ny tsara indrindra. Aho somary saro-kenatra sy ny Disco dia tsy mba toy izany. noho izany, miandry ho lehibe ny valim, izaho no vehivavy sy ny taona. Te hanana namana fotsiny na ho tsara Buddy. Fa ny fantatro dia tsy misy tsotra izao. Ny fomba Izay tsy afaka ianarana ry zalahy. Ao am-pianarana ihany.
Ary raha tsy izany, fantatrao Eny tsy misy, satria tsy misy olona miresaka aminao. Ahoana no mianatra eto ry zalahy. F: Hey, aho ary te-hianatra momba ny mahafatifaty ry zalahy mahafantatra, satria izaho ihany no nanana traikefa ratsy. Na dia tsy afaka mianatra izany amin’ny Disco saingy mbola te-mahafantatra olona iray. Izaho koa tena saro-kenatra sy afa-miantso, noho izany, tsy ny zaza. Azonao angamba ny manome soso-kevitra. Misaotra anao isaky ny Hanao aho ho lasa ho toy ny, fa te-hianatra mba ho vehivavy. Afaka mandeha ny toro-hevitra ny amin’ny toerana ankoatra ny Fandihizana tsara ny vehivavy. Aho mandinika ny mifamadika izy ny ny tovovavy ‘ny sekoly sy ny tovovavy’ ny sekoly kilasimandry. Ao amin’ny tambajotra misy dia tsy betsaka ny info: (na izany aza, aho namaky fa ny ankizivavy dia afaka mianatra tsy misy ankizilahy tsara kokoa. Fantatrao ve fa raha ny marina. Angamba ianao mahalala olona na ny tena mandeha ny tovovavy ny sekoly. Ho faly ny momba ny valiny) izaho w ary efa kely olana. Aho hanatrika ny tovovavy an-tsekoly, ka efa nandritra ny taona maro, tsy dia tena nifandray ry zalahy. Izany ampahany izany fa koa ny karazana tinder fahamaotiana, mba hianatra ny hafa ny lahy sy ny vavy mba mahalala na. Miaraka dia afaka mandeha dia Eny, amin’ny kely indrindra amin’ny ny vehivavy sakaizany mba hankalaza sy ny ankizilahy hatramin’ny mahazo ny mahafantatra, fa misy fomba hafa. Hi, aho tsy manana namana tsara maro sy afa-tsy ny roa tamin’izy ireo no lahy. Tiako ny hihaona olona vaovao ary mety ho namana vaovao, nefa aho miaina amin’ny tanàna kely iray, ary ny olona rehetra eto dia mahafantatra ary koa ny olona, raha ny marina. Afaka Milomano eto E, na ny fiakarana ala mitaingina na zavatra, fa tsy ny fomba tokony aho mba avy eo ny olona te-hahafantatra ny tena, satria aho somary saro-kenatra. afaka manampy ahy angamba. Velona aho tao amin’ny tanàna kely iray amin’ny mahantra Fifandraisana sy eto mianatra ny zara raha ry zalahy mahafantatra ny manana hevitra ny fomba ahafahako mianatra tsara indrindra ny ry zalahy. Tiako ny manana roa ry zalahy toy ny buddy.
Izany dia ampy ho ahy
Tiako izany, satria raha ny marina aho manana lehilahy vady na dia tsy misy manohitra ianao. Be dia be ny ankizivavy avy ny mpianatra hahafantatra Nahatsapa ny olona sy ny ireo, fara fahakeliny, ny lehilahy. Ny fanontaniana dia hoe aiza no mianatra ry zalahy ao amin’ny n Hey ho fantatrao na dia tena saro-kenatra, ary tsy ho an’ny lahatsary firesahana amin’ny, na zavatra mba hisoratra anarana. Miarahaba, izaho dia te mba hahafantatra ny fomba sy ny izay afaka mianatra momba ny mahafatifaty zazalahy, ary inona ny tovolahy ny tovovavy toy ny) Misaotra mialoha Lenaus efa voaangona tao anatin’ny fotoana tena be dia be ny ratsy traikefa ny amin’ny fifandraisana. Aho, noho izany, mandroso fotsiny roa ry zalahy mba hahafantatra anao ny tsara sy lalina namana f mety ho heno any amin’ny tsy misy fa amin’ny fifandraisana. Ny Olana dia ny hoe mandeha any aho mba rehetra-ny tovovavy an-tsekoly sy ny, noho izany, tsy be loatra ny fifandraisana amin’ny ankizilahy tao ny taona, aho. Raha toa aho ka nahita zazalahy afaka manampy ahy izay fantatro fa tiany na dia ny namana avy amin’ny ahy sy ny tsy fifandraisana. Misy toa roa toetra toetra, amin’ny fanaovana izany. Mankasitraka aho ny valin-misaotra anao Miarahaba, aho tato ho ato dia matetika kokoa hatrany eo ny hariva ny Disco mba hanohy ny vehivavy sakaizany. Ny Namana indraindray manana zavatra atao miaraka amin’ny ankizilahy, fa tsy. Na izany aza, dia te mba hahafantatra ny zavatra. Fa tsy manana hevitra ny fomba fitondran-tenany sy izay holazaina. Taorian’ny aho fa mangina sy voatokana Olona, heveriko fa tena sarotra. Tsy mety angamba ny toro-hevitra vitsivitsy na hevitra ho ahy. Misaotra anareo aho handeha ho any amin’ny rehetra-ny tovovavy an-tsekoly sy fotsiny aho ho namana tsy misy fifandraisana amin’ny ry zalahy, na momba ry zalahy (Ahoana no ahafahako mianatra izay mba mahalala Izay na ny fomba azonao atao ny mianatra ny tsara indrindra ny olona. Tsara ry zalahy izay ianao zava-dehibe dia afaka ny voly sy ny sisa. Hello. Handeha aho mba rehetra-ny tovovavy an-tsekoly, sy te-hanontany aiza ny hamaly Faty no tonga ao, fa ny rehetra ny tovovavy ny sekoly dia vavy. Aho hoe, ianao raha ny vehivavy miray amin’ny vehivavy, ianareo ry zalahy mbola mijaly ny namany miaraka aminy. Ny hei t, kanefa tsy hoe tsy maintsy mandeha any ny tovovavy ny sekoly. Ary hei t ihany koa fa tsy hoe tsy misy fa mandeha any amin’ny Tsy-rehetra-ny tovovavy an-tsekoly, dia ny vehivavy miray amin’ny vehivavy. Aiza no avenged ity sekoly ho an’ny tovovavy an-tsekoly feno ny vavy. Ahoana no ahafahanao, mandihy Disco amin’ny tsara indrindra ny vehivavy mihaona indray mandeha monja, na ny zava-pisotro ny mandany. Hello. Izaho handeha any amin’ny tovovavy an-tsekoly ary, noho izany, ny ankamaroan’ny vehivavy ny fifandraisana. Fantatro ry zalahy roa avy ny Hahita ny hoe iza aho, fa tsy izany no tena maro, ary izaho dia mitsako dia nanana namana miaraka ny mpivady. Ahoana no hihaona ry zalahy sy hanorina finamanana. Aho fa saro-kenatra sy matahotra aho fa mahazo izany r raha toa aho inona ny tsy te. Aho
VideoChat isaky ny tsirony. Maimaim-poana sy tsy misy fisoratana anarana →